God the Potter - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Andriamanitra mpanefy tanimanga
Tsarovy ny fotoana nampifantohan’Andriamanitra ny sain’i Jeremia ho amin’ny fitoeran’ny mpanefy tanimanga (Jer. 1 Nov.8,2-6)? Nampiasa ny sarin’ny mpanefy tanimanga sy ny tanimanga Andriamanitra mba hampianatra antsika lesona lehibe iray. Hafatra mitovy amin’izany amin’ny fampiasana ny sarin’ny mpanefy tanimanga sy ny tanimanga no hita ao amin’ny Isaia 45,9 sy 64,7 ary koa ao amin’ny Romana 9,20-21.
Iray amin'ireo kapoaka ankafiziko, izay matetika no misotro dite ao amin'ny birao, no mitondra ny sarin'ny fianakaviako. Rehefa mijery azy aho dia mampahatsiahy ahy ny tantaran'ny fizahan-tenan'ny fitenenana izy. Ny tantara dia lazain'ny teacup amin'ilay olona voalohany ary manazava ny nahatonga azy namorona azy.
Tsy fahitana hatsaram-panahy mahafinaritra foana aho. Tany am-boalohany tsy ara-dalàna fotsiny aho tamin'ny voalohany. Saingy nisy olona nametraka ahy tao amina kapila iray ary nanomboka nivezivezy haingana ilay kapila izay lasa sahirana aho. Raha nitodika aho dia nihatsakitsoka, nisitrika ary nandroritra ahy. Nikiakiaka aho: "Atsaharo!" Nefa nahazo ny valiny aho: "Tsy mbola!".
Farany dia najanony ny varavarankely ary napetrany tao anaty lafaoro aho. Nafana kokoa izany ary nihamaina hatramin'ny andro niantsoantso hoe: "Ajanony!" Nahazo valiny indray aho "Tsy mbola!" Tamin'ny farany, dia nesoriny avy tao anaty lafaoro aho ary nanomboka nandoko loko tamiko. Narary tamiko ny setroka ary niantso indray aho hoe: "Ajanony!" Ary ny valiny indray dia ny: "Mbola tsy misy!".
Avy eo dia nentiny avy tao amin'ny lafaoro aho ary rehefa avy nihamangatsiaka aho, dia napetrany teo ambony latabatra teo alohan'ny fitaratra. Gaga aho! Ny mpanefy vilany dia nanao zavatra tsara noho ny tanimanga tsy misy dikany. Tanimanga avokoa isika rehetra, sa tsy izany? Amin'ny alàlan'ny fametrahantsika ny kodiaran'ny mpanefy tanin'ity tany ity, ny mpanefy tanintsika tompontsika dia mahatonga antsika ho vaovao vaovao izay tokony ho araka ny sitrapony!
Raha niresaka ny amin’ny fahasahiranan’ity fiainana ity izay toa tojontsika matetika tokoa i Paoly, dia nanoratra toy izao: “Tsy ketraka amin’izany izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny anatiny. Satria ny fahoriantsika, izay ara-nofo sy mora, dia miteraka voninahitra mandrakizay sy mavesatra ho antsika izay tsy mahita ny hita, fa ny tsy hita. Satria ny zavatra hita dia ara-nofo; fa izay tsy hita dia mandrakizay »(2. Korintiana 4,16- iray).
Ny fanantenantsika dia miankina amin'ny zavatra any ivelany sy ivelan'ity tontolo ankehitriny ity. Matoky ny Tenin’Andriamanitra isika, mahita fa mora sy ara-potoana ny fahoriantsika ankehitriny raha ampitahaina amin’izay nomanin’Andriamanitra ho antsika. Anisan’ny fomba fiaina kristianina anefa ireny fitsapana ireny. Amin’ny Romana 8,1718 Izao no vakintsika: “Fa raha zanaka isika, dia mpandova koa, dia mpandova an’Andriamanitra sy mpiara-mandova amin’i Kristy, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-mankalaza aminy koa. Satria matoky aho fa izao fahoriana izao dia tsy mampandanja ny voninahitra izay haseho amintsika”.
Miombona amin’ny fijalian’i Kristy amin’ny lafiny maro isika. Ny sasany, mazava ho azy, dia maty maritiora noho ny finoany. Kanefa, ny ankamaroantsika dia miombona amin’ny fijalian’i Kristy amin’ny fomba hafa. Mety hamadika antsika ny namana. Matetika ny olona no diso hevitra, tsy manome lanja antsika, tsy tia antsika na manararaotra antsika mihitsy aza. Na izany aza, rehefa manaraka an’i Kristy isika, dia mamela heloka tahaka ny namelan’Andriamanitra antsika. Nanao sorona ny tenany Izy fony isika fahavalony (Rom. 5,10). Izany no antony iantsoany antsika hanao ezaka bebe kokoa hanompoana ny olona manararaotra antsika, tsy manome lanja antsika, na tsy mahatakatra antsika, na tsy tia antsika.
“Araka ny famindrampon’Andriamanitra” ihany no niantsoana antsika ho “sorona velona” (Rom. 1.2,1). Andriamanitra dia miasa ao anatintsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina mba hanova antsika ho tahaka ny endrik’i Kristy (2. Korintiana 3,18), zavatra tsara lavitra noho ny vongan-tanimanga mangotraka!
Andriamanitra dia mavitrika ao amintsika tsirairay avy, amin'ireo fisehoan-javatra sy olana rehetra izay tonga amin'ny fiainantsika. Saingy mihoatra ny zava-tsarotra sy ny fitsapana atrehantsika, na eo amin'ny fahasalamana na ara-bola na famoizana ny olon-tiana iray, dia momba antsika Andriamanitra. Izy io dia mameno antsika, manova antsika, mamolavola ary mamolavola antsika. Tsy hiala na hanadino antsika mihitsy Andriamanitra. Miaraka amintsika amin'ny tolona rehetra Izy.